100G / 200G Coherent Optical Modules | GIGALIGHT
Gaarsii ilaa 120km, 600km, ama 1200km
Xalka ugu Haboon ee Metro / Long-haul & DCI
Miisaaniyadda iskuxiran, isuduwaha, iyo shuruudaha gudbinta sida xaddiga xogta, daahida, iyo ilaalinta iwm waa la hagaajin karaa.
Maxaa loo yaqaan 'Coherent Optics'
Qaadashada go'aanka ah ee FEC waxay u saamaxdaa calaamadaha in ay ku dhex socdaan fogaanta dheeraata iyagoo ubaahanaya dhibcood yaryar. Waxay bixisaa marin ka badan, taas oo u oggolaanaysa calaamado dhererkoodu sarreeyo si ay u safraan fogaanta dheeraadka ah.
Nidaamka isdabajoogu wuxuu bixiyaa awood sarreeya xagga ROADM, taas oo keentay in tayada waxtarka korodhsiinta loo mariyo kanaalka super. Qaab dhismeedka xayeysiinta ayaa muhiim u ah nidaamka xariirka dabacsan maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa sidayaasha inay isku dhejiyaan si wadajir ah si ay u ballaadhiyaan awooda.
Iyada oo barnaamijyada la adeegsanayo, tiknoolijiyada waxaa loo qorsheyn karaa shabakado kala duwan iyo dalabyo waxayna ku taageeri karaan qaabab badan oo wax lagu beddelo iyo / ama heerarka kala duwan ee boodka, taas oo u sahli karta dadka ka shaqeeya inay kala doortaan heerar kala duwan.